Xill Sulub “Dowlada Puntland Waxay Diyaar u tahay in Awood ay u adeegsato Laascaano” – SBC
Xill Sulub “Dowlada Puntland Waxay Diyaar u tahay in Awood ay u adeegsato Laascaano”
Wafdi ka tirsan Maamulka Puntland ayaa ka warbixiyay kormeero ay ka soo laabteen oo mudooyinkii ugu dambeeyay ay ku marayeen qeybo ka mid ah gobolka Ceyn.
Wafdi ka koobnaa Sedax xubnood oo isugu jira Labada gole ee Dowlada iyo Ciidanka Amaanka sida Wasiir ku xigeenka wasarada waxbarashada, Taliye ku xigeenka Booliska Puntland, iyo xildhibaan ka tirsan Baarlamanka ayaa mudo ka badan 3 bil safaro ku marayay deegaanada gobolka Ceyn.
Xildhibaan Faarax Sulub Jaamac waxa uu ka mid yahay xildhibaanada Baarlmanka ee ka mid ahaa wadigaasi waxaana uu ka warbixiyay waxyaabihii ay safarkooda ku soo arkeen.
Xildhibaanku waxa uu si aad ah u cambaareeyay Dhaq dhaqaaqyada maamulka Soomaaliland uu ka wado qeybo ka mid ah gobolka Ceyn iyo Sool, isagoona sheegay in maamulkaasi uu xadgudub xoogleh ka wado goboladaas.
Waxa uu faah faahin ka bixiyay qaababka waxbarasho iyo ganacsi ee magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool oo ay ku suganyihiin ciidamada Maamulka la baxay Soomaaliland.
Waxa uu sheegay in aanay jirin wax barasho ka jirta magaalada xitaa gaancsiga ayna maamulka Soomaalidiidka ah ee halkaasi ku sugan ay xasuuq xoogleh ku hayaan dadka rayidka reer Puntland ee halkaasi dhaqan.
Xildhibaan Sulub ayaa intaasi ku daray in ciidankoodu maamulkaas ay afka soo duubtaan islamarkaana dadka deegaanka ku hayaan xasuuq, taasina ayuu yiri ma ahan mid loo dulqaadan karo .
Waxaanu ugu hanjabay in xiligan waxa ka bilowda ay Puntland diyaar u tahay in ay awood u adeegsato sidii gobolka Sool ay gacanteeda dib ugu soo laaban laheyd.
“Nimanka Meesha ku habsaday, Intey Madaxa Sooduubtaan ayay qofkii dhaqaaqaaba Madaxa ka togtaan, Cid isweydiineysana Malaha” ayaa hadaladiisii ka mid ahaa xildhibaan Faarax Sulub.
Sidoo kale wada uu Xildhibaanku Cambaareyn dusha uga tuuray Madaxweynaha Maamulka la Baxay Soomaaliland Mr Siilaanyo oo uu sheegay in aany aheyn qof lagu tilmaami karo Islaam ama Soomaali, sida uu hadalka u dhigaye,
“Ka dib markii uu xilka la wareegay Siilaanyo Waxuu bilaabay in uu boobo deegaanada reer Puntland, dadkii degenaana uu ku bedelo dad aan dhulka u dhalan oo uu ka keenay Waqooyiga Fog”
“Wuxuu bilaabay in uu dadka qixiyo oo uu ku sameeyo Xasuuq cad” ayaa uu hadalkiisa ku siidaray xildhibaan Faarax Sulub Jaamac.
Hadalka Xildhibaanka oo dhinacyo badan Taabanayay ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in Siilaanyo uu weligiis ahaa nin Qabqable ah islamarkaana uu geystay xasuuq loona baahanyahay in loo gudbiyo Maxkamada Dembiyada Caalamiga ah ee Heeg si loogu qaado Dembiyada uu geystay.
Hadaba Codka Xildhibaan Faarax Sulub Jaamac halkan ka Dhageyso.
[audio:http://sbclive.net/sbca/wp-content/uploads/2011/07/Xildhibaan-Faarax-Sulub-Jaamac-silanyo.mp3|titles=Xildhibaan Faarax Sulub Jaamac silanyo]
Sikastaba ha ahaatee mudo ku siman 3 sano iyo dheeraad ayaa uu maamulka Soomaaliland ku suganyahay Magaalada Laascaasno iyo guud ahaan gobolka Sool isagoo sheeganaya in uu gobolkaasi ka mid yahay Soomaaliland.
yes now we get the point why we dont make this action before i support our government puntland and we will defend our home land sool and cayn one of the regions in puntland i have to inform all puntlanders to participate that morally and mentally thank u so much
waar ninkan muxuu soo arkay adeer dadka hanagu dirin laascanod way la jaan qaday, wanagii imtixankii guud ee sec samaynay markaa iska dhaaf qabyalada ayaan ku leeyahay oo kalay horumarka gobolka nagala qayb qaado.